Qaramada midoobay oo difaacday go’anka dalkan Kenya ee dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed – The Voice of Northeastern Kenya
Qaramada midoobay oo difaacday go’anka dalkan Kenya ee dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed
Qaramada midoobay ayaa waxa ay difacday go’anka xukumadda ay qaadatay kaas oo ku aadan dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab waxana ay sidoo kale masuuliyiinta qaramada midoobay ay beeniyen in dawladda dalkan Kenya ay cadaadis xoogan ku heyso qaxootiga soomaaliyeed kaas oo ku aadan in qaxootiga ku sugan xerada qaxootiga ee caalamka ugu weyn ee dhadhaab ay dalkaooda hooyo dib ugu laabtan.
Afhayeen u hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Duke Mwencha kaas oo la hadlay warbaahinta dalkan Kenya maalinta shalay ahayd ayaa waxa u sheegay in aan la qasbeynin qaxootiga ku dhaqan xerada qaxootiga ee Dhadhaab in ay dib waddankooda hooyo ugu laabtan.
Afhayeenka ayaa sheegay in haddi dib u celinta qaxootiga lagu sameeyo qab ay ku dheehantahay xoog in taas ay meel ka dhac ku noqoneyso heshiiska 3 geesoodka ahaa ee dhex maray qaramada midoobay,dawladda dalkan Kenya iyo sidoo kale tan Soomaalia.
Mr Mwencha ayaa sheegay in ilaa iyo hadda ay dad tiradooda tahay 19,346 qof ay si iskood ah dib ugu laabten waddanka Soomaalia.
Sarkaalka oo hadalkiisa sii wato ayaa sheegay in ay wadaan geedi socodka lagu xaqiijinaayo in dadka dib ugu labanaayo waddanka soomaalia ay yihiin qaxootiga dhabta ah maadama ay soo baxeen warar sheegaya in ay jiran dad Kenyan ah oo horey isaga diiwan galyay xeryahaas si ay uga fa’aideystan adeegyada ay bixiso hay’ada qaxootiga u qaabilsan ee UNHCR.
Qaramada midoobay ayaa biishi la soo dhaafay waxa ay shaaca ka qaaday in ay jiran 42,000 oo qof kuwaas oo u dhashay waddanka iyago isla markaasina isku diiwan galyay in ay yihiin qaxooti.
Si ay tirada dadka dib ugu laabanayo soomaalia ay sare ugu qaado ayaa waxa ay qaramada midoobay sare u qaday lacagihi ay siini jirtay dadka dib waddanka soomaalia si iskood ah ugu laabanaayo.
Iyado horey dadka dib si iskood ah ugu laabanayo la siin jiray lacag dhan 150 doolar ayaa waxa hadda lacagtaas sare loo qaaday iyado laga dhigay 200 oo doolar taas oo u dhiganta 20,000 oo shillinka dalka ah sida u sheegay Duke Mwancha oo ah afhaayen u hadlay qaramada midoobay.
← Xoghayaha guud ee gudiga qaran ee ciyaaraha olimpikada oo lagu xiray saldhiga muthaiga
Magaalada daraya oo ay isaga baxayaan dadki ku dhaqana →